Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) - Hello Sayarwon
Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း )
Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) ကဘာလဲ။
သင့်မှာ ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့ တယ်ဆိုတာက သင့် ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ဒီ ဗိုက်တာမင်အမျိုးအစား လုံလောက်မှုမရှိတော့တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်မှာ အောက်စီဂျင်ကို သယ်ပေးတဲ့သွေးနီဥတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဗိုက်တာမင် B12 ကို လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဗိုက်တာမင် B12 နည်းသွားပြီဆိုရင် အလုပ်လုပ်ဆောင် ပေးနေတဲ့ သွေးနီဥတွေ လုံလုံလောက်လောက် မထုတ်နိုင်တော့တဲ့ အတွက် သွေးအားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းခြင်း ဖြစ်တဲ့အခါမှာ သင့်ကို အားအင်လျော့နည်းစေပြီး ပင်ပန်းလွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် B12ချို့တဲ့ခြင်းက သင့်ရဲ့ အာရုံကြောတွေကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အတွက် မှတ်ဉာဏ်တွေနဲ့ တွေးတောမှုတွေအပေါ်လည်း သက်ရောက်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။
Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းဟာ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ ပို ပြီး အဖြစ်များပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးနေဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းဟာ ပိုလို့တောင် အဖြစ်များပါသေးတယ်။ ဘ၀ အစောပိုင်းကတည်းက စတင်ဖြစ်ပြီး တစ်သက်လုံးရောဂါ ကြာရှည် တည်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း ဒီရောဂါကို ဖြစ်ဖို့ အားပေးနေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းခြင်း ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
B12 ချို့တဲ့ ခြင်းပမာဏဟာနည်းမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေက အရမ်း မပြင်းထန်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့သောသေူတွက အဲဒါတွေဟာ အသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တာတွေ လို့တောင် ထင်တတ်ကြပါတယ်။ သွေးအားနည်းခြင်းဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆိုးလာတာနဲ့ အမျှ သင့်မှာ အောက်ပါ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အသားအရောင် ဖြူဖတ်ဖြူရော် ဖြစ်ခြင်း။
လျှာတွင် ရောင်ယမ်းပြီး နီရဲနေခြင်း(သို့) သွားဖုံးသွေးထွက်ခြင်း။
အစာအိမ် ထဲမှာ မကောင်းသလို ခံစားရပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားခြင်း။
အဲဒီလို ဗိုက်တာမင် B12 အကြာကြီး ချို့တဲ့ လျော့နည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အာရုံကြော ဆဲလ်တွေကို တောင် လာထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်း ထိပ်များတွင်ထုံခြင်း၊ ကျင်ခြင်း။
စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်း၊ စိတ်စွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်း။
စောစောသိရှိပြီးကုသမှုခံယူတာက ဒီအခြေအနေကို ပိုပြီးဆိုးလာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ ဖြစ်မလာအောင်လည်း တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ စောနိုင်သမျှစောစော တွေ့ဆုံပြီး ဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာမှာကို ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။
Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသား၊ ဥမျိုးစုံ၊ နို့၊ နှင့် ချိစ် စတဲ့ နေ့စဉ် အစားအစာ တွေထဲမှာပင် လူတော်တော်များများက လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ B12 ပမာဏကို ရကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဲဒီ ဗိုက်တာမင်ကို အစာအိမ်လမ်းကြောင်းရဲ့ အစာအိမ်နဲ့ အူတွေမှာ စုပ်ယူပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် B12 ချို့တဲ့ ရခြင်းဟာ အဲလို ဗိုက်တာမင်တွေကို အစာလမ်းကြောင်းမှာ မစုပ်နိုင်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါ အခြေအနေတွေရှိနေပါက အစာခြေလမ်းကြောင်းမှ ဗိုက်တာမင်တွေကို မစုပ်နိုင်တော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
pernicious anaemia ဆိုတဲ့သွေးအားနည်းခြင်း တစ်မျိုးရှိရင်။ ဒီသွေးအားနည်းခြင်းအမျိုးအစားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ခန္ဓါကိုယ်က ဗိုက်တာမင် B12 ကို စုပ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးတဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ အရင်က အစာအိမ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကို ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်ရတာမျိုး(သို့) ileum လို့ခေါ်တဲ့ အူရဲ့ နောက်ဆုံး အပိုင်းကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတာမျိုး လုပ်ဖူးရင်။ အဲဒါတွေမှာ အဝလွန်နေတဲ့ သူတွေကို ကိုယ်အလေးချိန်ချပေးတဲ့ ခွဲစိတ်မှုမျိုး တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
သင့် ခန္ဓါကိုယ်မှာအစာချေခြင်း နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေရှိနေရင်။
Celiac disease တို့၊ Chron’s disease စတဲ့ရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ရဲ့ အူတွေမှာ ဘက်တီးယီးယားအကောင်တွေ၊ ကပ်ပါးကောင်တွေက ကြီးထွားနေတတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သာမာန်အားဖြင့် သင့်မှာ အောက်ပါ အခြေအနေတွေရှိနေရင် ဗိုက်တာမင် B 12 ချို့တဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ဖို့ ပိုများပါတယ်။
သင်စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ အသား၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ သစ်သီးများ၊ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ကဲ့သို့သော သဘာ၀ ဗိုက်တာမင်အရင်းအမြစ်တွေ နည်းခြင်း၊ (သို့) မပါဝင်ခြင်း။ ဒီအထဲမှာ အသားမစားသူတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ ရှောင်ကြဉ်သူတွေ၊ သတ်သတ်လွတ်စားသူတွေ၊ ပါဝင်ပါတယ်။ အစားအစာတွေကို အကြာကြီး အကျက်လွန်အောင်ချက်တာက လည်း ဗိုက်တာမင်တွေကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်တာမင်တွေကို စုပ်ယူပေးတယ့် ဖြစ်စဉ်ကို အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်တယ့် အခြားရောဂါတွေ(သို့) အူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ရောဂါတွေရှိနေခြင်း။ သင့်ရဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာ ပုံမမှန်ဘဲ ဘက်တီးယီးယားတွေ ကြီးထွားနေခြင်း၊ (သို့) အစာအိမ်၊ အူစတာတွေကို ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖူးခြင်း တွေက ဗိုက်တာမင် B12 စုပ်ယူတာကို နှောက်ယှက်နိုင်ပါတယ်။
အရက်သောက်သုံးခြင်း။ အရက်ကလည်း ဗိုက်တာမင် B 12 စုပ်ယူတာကို ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်တာမင်စုပ်ယူခြင်းကို တားဆီးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေသောက်သုံးခြင်း။ antacids တွေနဲ့ ဆးီချို အမျိုးအစား ၂ ကို ကုသဖို့ အသုံးပြုနေတဲ့ဆေး တစ်ချို့ဟာ B12 စုပ်ယူတာကို နှောက်ယှက်နိုင်ပါတယ်။
Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို ဒီရောဂါ ဖြစ်နေတယ်လို့ သံသယရှိပါက အရင်က သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေ၊ အခုဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာတွေ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းတွေမေးပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးနီဥအရေ အတွက် နဲ့ ဗိုက်တာမင် B12 အလုံအလောက်ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးဖို့အတွက် သွေးစစ်ဆေးချက် တစ်ချို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။
အခြား ဗိုက်တာမင် Bတွေနဲ့ folic acidတွေကို လည်းစစ်ဆေးရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော ဗိုက်တာမင် B12 ချို့တဲ့ နေတဲ့သူတွေမှာ folic acid ပမာဏလည်းနည်းနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေနှစ်ခုဟာ ရောဂါ လက္ခဏာလည်းခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုသမှုကတော့ မတူပါဘူး။
Vitamin B12 Deficiency Anemia (ဗိုက်တာမင် ဘီ ၁၂ ( B12) ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဗိုက်တာမင် B12 ချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းကို ဗိုက်တာမင် B12 ပေးပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် ပမာဏကို ပုံမှန် ပြန်ရောက်သွားအောင်လို့ စစချင်းလုပ်ဆောင်ရမှာက ဗိုက်တာမင် B12 ပေးတာပါပဲ။ အဲလို B12 သောက်လိုက်တဲ့အခါ ရောဂါလက္ခဏာတွေ လည်း ပျောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အမြဲပုံမှန်ပမာဏရောက်အောင် ထိန်းထားနိုင်ဖို့က အမြဲတမ်း၊ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး B12 သောက်နေရမှာပါ။ ဆေးရပ်လိုက်တာနဲ့ သွေးအားနည်းတာ သေချာပေါက်ထပ်ဖြစ်လာမှာပါ။
B12 ပေးတာက သောက်ဆေးလုံးလေးတွေ ဖြစ်နိုင်သလို ထိုးဆေးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုးဆေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အိမ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ သင်ကြားထားနိုင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများ အတွက်တော့ ဆေးလုံးတွေက ထိုးဆေး လိုပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထိရောက်မှုလည်းရှိပါတယ်။ ဆေးလုံးတွေက အကုန်အကျ သက်သာပြီး အသုံးပြုဖို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ ထိုးဆေးထိုးနေရတယ်ဆိုရင် ဆေးလုံးပြောင်း သောက်လို့ရလား ဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ မေးမြန်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားကုသမှု တစ်မျိုးက B12 ပါဝင်တဲ့ နှာခေါင်း ဖြန်းဆေး ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာပဲ ဗိုက်တာမင် B12 ကြွယ်ဝတဲ့ အသား၊ နို့၊ ချိစ်၊ ဥ စတာတွေ စားပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း သင့်ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုက်တာမင် B အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ folic acid ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေလည်း စားပေးရပါမယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အစိမ်းရောင် ဟင်းရွက်များ၊ ချဉ်သော အသီးများ၊ နဲ့ ပေါင်မုန့်၊ ပြောင်း၊ဂျုံ၊ဆန် စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Vitamin B12 deficiency anemia.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vitamin-deficiency-anemia/symptoms-causes/dxc-20265323.Accessed December 15, 2016.
Vitamin B12 deficiency anemia.http://www.webmd.com/a-to-z-guides/tc/vitamin-b12-deficiency-anemia-topic-overview#1. Accessed December 15, 2016.
Vitamin B12 deficiency anemia.http://www.b12d.org/. Accessed December 15, 2016.